Q.Midoobay oo ku fashilantay in ay diido deegaamaysiyada Yahuudda ee Daanta galbeed.
Thursday November 21, 2019 - 10:34:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa ku fashilmay in ay dhaleeceeyaan qorshaha maamulka Yahuudda sahyuuniyadda ay deegaamaysi sharci darra ah uga sameynayaan dhulalka Filasdiin Mareykankuna taageero siiyay.
Fadhi ay 'golaha ammaanka' ku yeesheen magaalada New York ayay uga doodeen sida laga yeelayo deegamaysiyada sharci darrada ah ee maamulka Yahuudda uu ka wado deegaannada dhaca daanta galbeed ee Wabiga Urdun.
Dowladaha ku bahoobay Ururka Midowga Yurub oo ay ugu horreeyaan Ingiriiska,Faransiiska,Jamralka iyo Biljamka ayaa si kulul udhaleeceeyay tallaabada uu Mareykanku ku sharciyeeyay deegaamaysiyad ay Yahuuddu bilaawday.
Waxa loogu yeero Q.Midoobay oo ah gole loo sameeyay sidii lagu hagar daamayn lahaa muslimiinta ayaa ku guul darraystay in uu soo saaro go'aan loo dhanyahay oo lagu diidanyahay ama lagu dhaleecaynayo deegaamaysiga Yahuudda ee dhulalka Filasdiin.
Maamulka Yahuudda ayaa maalmo ka hor bilaabay in uu kumanaan guri ka dhiso dhulalkii uu ka boobay shacabka Falasdiin oo kuyaal deegaannada Daanta galbeed, tallabada Yahuuddu qaadday waxaa taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed siinaysa dowladda Mareykanka.
Ciidamo katirsan Liyuu Booliska Itoobiya oo lagu laayay Somaaligalbeed.
Sarkaal ushaqeynayay Q.Midoobay oo Muqdisho lagu dilay.
Q.Midoobay oo soo Afjartay Howlgalkii ay ka wadday gobolka Darfur.
Melleteriga Itoobiya oo qafaal ka dhan ah dhalinyarada ka bilaabay deegaanno katirsan Soomaaligalbeed.
Q.Midoobay oo sheegtay in dagaallo culus ay wali kasii socdaan gobolka Tigray.
Dhaxal sugaha Sacuudiga iyo R/wasaaraha Yahuudda oo kulan yeeshay.